Sinoa iray no nosamborina tao anaty hotely tetsy Ankazomanga. Nisy naheno ny fofon-drongony izay nofohany tao anatin’ilay efitra. Rehefa tonga ny polisy nisava ilay toerana dia mbola nahitàna sokatra miisa 24 koa tao. Izany hoe sady manao trafikan-tsokatra koa ity vahiny ity. Efa nisy fotoana izy voasambotra noho ny fitazomana basy tsy ara-dalàna tany aloha tany, raha araka ny fantatra.
Tsy misy idiran'ny didy tsy fahafahana mivoaka ny sisin-tanin’i Madagasikara na IST izay navoaka ho azy no antony nanajanonana ny Tale Jeneralin'ny ACM teo aloha. Efa tapitra tamin'ny faran'ny volana febroary teo ny fotoam-piasany saingy nifampitontona tamin'izay koa ny IST mahakasika azy. Mbola vao eo am-pitadiavana ny ho solony ny filankevim-pitantanan'ny ACM hatramin'ny 25 martsa.
Fiara golf iray no nirehitra tetsy Tsaralalana manakaiky ny Anjary Hotel omaly tolakandro, nikorapaka ny manodidina satria teo akaikina trano fivarotana goavana no nitrangan’ny loza ary tena nidedaka ny afo.Soa ihany anefa fa tonga ara-potoana ny sampana mpamonjy voina koa dia tsy nihanaka fa voafehy haingana ny afo.Potika tanteraka ny moteran’ilay fiara, tsy nisy kosa ny aina nafoy na naratra.
SEKOLY HO VOASAZY
Misy sekoly izay mety handraisana fepetra ato ho ato noho ny fanomezany alàlana ny mpianatra mba hampandihy vody no sady miboridandridana. Izany anefa dia ao anaty fetin-tsekoly. Efa niparitaka tamin’ny tambajotra sosialy ny horonan-tsary ary raha ny re dia efa nisy nampandre ny sampana cybercriminalité eto an-drenivohitra. Midika izany fa ny sekoly mihitsy no mampidina hasina ny mpianatra indraindray.
JEAN NIRINA HAFARI
Nidoboka am-ponja indray i Jean Nirina Rafanomezantsoa afak’omaly rehefa niakatra teo amin’ny fampanoavana etsy Anosy. Karàna izay mitondra ny anarana H. Hno mpitory azy. Izany dia noho ny filazàna fa nanery azy ny hanome vola i Jean Nirina Hafari. Tany izay mitondra ny titre 72958A ny anton’ny fifandirana eo amin’ny roa tonta. Re ihany koa ankehitriny ny anarana depiote teo aloha fa hoe mifandray amin’ity raharaha ity .
Fantatra mazava fa i Jeneraly Baomba na i Jeneraly Ravalomanana Richard ilay voalazan’ny gazety sasany fa mpiaro an’i Maminirina Jean Eddy. Raha ny tsilian-tsofina re dia misy horonam-peo izay hilazan’i Eddy boaderozy mihitsy mandeha any izay milaza fa i Jeneraly Baomba no niaro azy hatrizay. Mafana tanteraka ny raharaha.
Misy amin’ny minisitera sasany no tsy mikirakira vola entina mampiodina ny sampan-draharahany intsony tale. Raha ny tsikaritra dia mitady vola fatratra ny fitondràna na koa manidy fehikibo ary entina hanaovana propagandy amin’ny fifidianana depiote ny vola. Misy sahady ny tale izay vaotendry no efa kamokamo miasa.